တောရက်စ် | 22/07/2021 20:00 | လှပမှု
သင်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အပူကိရိယာများမသုံးဘဲသင်၏ဆံပင်ကိုဖြောင့်အောင်လုပ်ရန်နည်းလမ်းရှာနေပါက Maizena ဂျုံမှုန့်သည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဆံပင်မျက်နှာဖုံးအဖြစ်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်ကုန်။ ၎င်းသည်ဂုဏ်သတ္တိများများစွာရှိသောကြောင့်ဆံပင်ကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်အကျိုးရှိသည်။ အခြားအကြား ပြောင်းဖူးမှုန့်သို့မဟုတ်ပြောင်းဖူးမှုန့်တွင်သံ၊ ဗီတာမင်နှင့်ဓာတ်သတ္တုများပါဝင်သည်.
၎င်းတို့အားလုံးသည်အာဟာရရှိသောပစ္စည်းများနှင့် antioxidants များကိုအပြင်ဘက်တွင်အသုံးပြုလျှင်ဆံချည်မျှင်သွေးကြောဖွဲ့စည်းပုံကိုတိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ဆံပင်အတွက် cornmeal ကိုလျှောက်သောအခါ, ဒီဖြစ်ပါသည် ဒီအစားအစာအားလုံးအာဟာရဂုဏ်သတ္တိများမှအကျိုးကျေးဇူးများကို။ အတွင်းပိုင်းမှဆံပင်ကိုအာဟာရဖြည့်တင်းပေးနိုင်ခြင်း၊ ပိုမိုနူးညံ့ချောမွေ့ခြင်း၊ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊
သင်ရရှိလိုသောရလဒ်ပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းဖူးမှုန့် (သို့) ပြောင်းဖူးမှုန့်ကိုအမျိုးမျိုးသောပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သငျသညျအရောင်ချွတ်သို့မဟုတ်အပူ tools များကြောင့်ပျက်စီးသွားသောဆံပင်တိုးတက်လာဖို့ရှာနေလျှင်, သင်ကအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူပြောင်းဖူးနှင့်ရောနှောဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ကတည်းကပေမယ့် ပြောင်းဖူးဓာတ်တစ်မျိုးတည်းက frizz ကိုသက်သာစေသည်သူ့ဟာသူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိပါ ဆံပင်ဖြောင့်ခြင်း.
ဤရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြောင်းဖူးမှုန့်ကိုအခြေခံသည့်မျက်နှာဖုံးတစ်ခုကိုအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဆံပင်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားမှုများရှိသော်လည်းရွေးချယ်စရာအမြောက်အမြားရှိပြီးရလဒ်ကောင်းများရှိသည်။ မင်းမှာဆံပင်ကောက်ကောက်ရှိရင် Cornstarch သည်ဆံပင်ကိုနူးညံ့ချောမွေ့စေရန်နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သို့သော်ညံ့ဖျင်းစွာသတ်မှတ်ထားသောဆံပင်ကောက်ကောက်ရှိသည့်လည်ပင်းတွင်ရလဒ်သည် ပို၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်။
ဒီပျားရည် cornmeal မျက်နှာဖုံးအတွက်သင်လိုအပ်မည့်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုသတိပြုပါ။ သင်ခိုင်မာသောပျော့ပျောင်းသောအရောင်နှင့်သင်ရှာနေသည့်သဘာဝသဘာဝဆံပင်ကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သောသဘာဝအာဟာရဓာတ်ပေါင်းစပ်မှု။
ဒီဆံပင်ဖြောင့်မျက်နှာဖုံးကိုပြင်ဆင်ရန်အတွက်သင်သည်အောက်ပါပါဝင်ပစ္စည်းများလိုအပ်လိမ့်မည်။ သတိပြုပါ၊ သို့သော်အုန်းဆီမရရှိလျှင်၊ သငျသညျအပိုအပျိုကညာသံလွင်ဆီအစားထိုးနိုင်ပါတယ်.
ဂျုံမှုန့်4ဇွန်း ပြောင်းဖူး
3 ဇွန်း miel
2 ဇွန်း အုန်းသီးရေနံ
အရောအနှောကိုပြီနောက်ဟင်းထဲသို့သွန်းလောင်းခြင်းနှင့် အနိမ့်အပူဆောင်ခဲ့ရမည်။ သင်တစ် ဦး ဂျယ်လီကဲ့သို့သော texture နှင့်အတူတစ် ဦး ငါးပိရမှီတိုင်အောင်အစဉ်မပြတ်နှိုးဆော်။
ကွန်တိန်နာကြီးတစ်ခုထဲမှာ သင်တစ် ဦး creamy မျက်နှာဖုံးရသည်အထိအားလုံးပါဝင်ပစ္စည်းများရောမွှေပါ။ ဆံပင်ပေါ်မှာအသုံးချနိုင်ဖို့တသမတ်တည်းရှိရမယ်။
အဝတ်လျှော်ခြင်းအားသင်၏ဆံပင်ပေါ်တွင်ဆေးကြောခြင်းမပြုဘဲထားပါ။ တစ်ခုလုံးကိုလည်ဆံဖုံးလွှမ်းသည်အထိ strand အားဖြင့်ကမ်းနားလမ်း.
ပြောင်းဖူးမှုန့်နှင့်ပျားရည်မျက်နှာဖုံးကိုဖွင့်ပါ မိနစ် 30 သို့မဟုတ် 40 အဘို့ပြုပါ.
လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအခါအားလျော်စွာထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရန်အရေးကြီးသည်၊ ထိုမှသာရလဒ်များကိုသင်တန်ဖိုးထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်ခြောက်သွေ့ခြင်းရှိလျှင်။ ဒီပြောင်းဖူးနှင့်ပျားရည်မျက်နှာဖုံး Apply တစ်ပတ်လျှင် ၂ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ်အကြားပျော့ပျောင်းသောခံနိုင်ရည် ရှိ၍ ဖြီးဆတ်နိုင်သောဆံပင်ကိုခံစားနိုင်သည် နှင့်တကယ့်ကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ချောမွေ့အတူ။ သင့်မှာဆံပင်ထူထူများနေရင်ဒါမှမဟုတ် ဦး ရေပြားပေါ်ကနေအလွှာပါးနေရင်၊ မျက်နှာဖုံးကိုသုံးတဲ့အခါဆံပင်ရဲ့အမြစ်တွေကိုရောက်အောင်ရှောင်ပါ။
နောက်ဆုံးလှည့်ကွက်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ သင်သည်အပူပေးကိရိယာများမသုံးဘဲတောက်ပ။ ချောမွေ့နူးညံ့သောလည်ဆံကိုပြလိုလျှင်, \_ t အောက်ပါ option နှင့်အတူပြောင်းဖူးနှင့်ပျားရည်မျက်နှာဖုံးပြောင်းပါ။ ပြောင်းဖူးမှုန့်ဇွန်း ၄ ဇွန်းကိုအုန်းနို့နှစ်ခွက်နှင့်ရောစပ်ပါ။ သင်က creamy ငါးပိမရောက်မှီတိုင်အောင်, မုန့်ညက်နှင့်အပူပျော်။ သင်၌ရှည်လျားသောဆံပင်သို့မဟုတ်ဆံပင်များများရှိပါကပမာဏနှစ်ဆတိုးပါ။
မျက်နှာဖုံးအဆင်သင့်ပြီးတာနဲ့ခြောက်သွေ့ပြီးကောင်းစွာညံ့နေသောဆံပင်ကိုလိမ်းပါ။ တစ်နာရီခန့်ကြာအောင်နွေးသောရေနှင့်ဆေးခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ပါ။ ပုံမှန်ဆံပင်ကိုလျှော်ပြီးလေကိုခြောက်စေပါ။ ဤသဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးသည်သင့်အားလှပသောလည်ဆံ၊ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ပြီးပြည့်စုံသော texture ရှိသောအချိန်မရွေးအဆင်သင့်ဖြစ်အောင်ပြသရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လှပမှု » ပြောင်းဖူးမှုန့်မှုန့်နှင့်အတူဆံပင်ဖြောင့်နည်း
သငျသညျလစျမလြှော့သော Stradivarius ၏နွေရာသီအသှငျအပွငျ